Baarlamaanka Soomaaliya oo ka arrinsanaya heshiiska dekadda Berbera – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Baarlamaanka Soomaaliya oo ka arrinsanaya heshiiska dekadda Berbera
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in uu ka doodo heshiiska shirkadda DP Wolrd ee laga leeyahay dalka Imaaraadka ay dhawaan la gashay Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax-bannaanida ee Somaliland.
Dowladda Soomaaliya ayaa kal hore sharcidarro ku tilmaantay heshiiska dekadda Berbera ee u dhaxeeya Somaliland iyo shirkadda DP World.
War saxaafadeed dhawaan ka soo baxay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda aysan aqoonsanayn heshiiska dhexmaray shirkadda DP World ee Imaaraatka iyo jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax-bannaanida ee Somaliland.
Shirkadda DP World oo maamusha dekeda weyn ee Dubai ayaa muddo sanad ah wadahadalo kula jirtay Somaliland, horay ayaana la’isugu afgartay in uu dhaqangalo heshiiska.
Heshiiska dekadda Berbera waxaa wada saxiixday Somaliland, DP World iyo dowladda Itoobiya oo la sheegay in saamigeeda ay ka iibsatay shirkadda Imaaraatka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dhowaynayso hay’ad iyo dowlad kasta oo doonaysa in ay maalgashato Soomaaliya laakiin loo baahanyahay in loo soo maro wado sharci.
Kulanka uu baarlamaanka Soomaaliya uga arrinsanayo heshiiska ku saabsan dekedda Berbera ayaa ku soo beegmayo iyada oo Somaliland ay hakisay wadahadalladii ay la lahayd dowladda Federaal Soomaaliya sababo la xiriira mowqifka dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay heshiiska dekadda Berbera.
← How ex-Kenya Power boss Gichuru built Sh20bn empire
Ruushka oo tijaabiyay gantaal xambaari kara Nuyuukleer →